ILLUSTRATOR အတွက်ဖောင့်ကို INSTALL လုပ်နည်း - မည်သို့ဖြစ်စေ - 2019
Illustrator အသစ်ဖော Installing
ဆော့ဖျဝဲကို Adobe Illustrator သိသိသာသာအခြားထုတ်ကုန်များထက်သာလွန်, vector ဂရပ်ဖစ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်တို့သည်ကြီးစွာသောကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ သို့သော်များစွာသောအခြားအစီအစဉ်များ၌ရှိသကဲ့သို့, စံ tools တွေကိုမကြာခဏအားလုံးအသုံးပြုသူစိတ်ကူးများအကောင်အထည်ဖော်လုံလောက်သောမရှိကြပေ။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်တော်ဆော့ဖ်ဝဲအသစ်ဖောင့်ထည့်သွင်းရန်နည်းလမ်းများကိုဖော်ပြရန်။
Illustrator အတွက်စာလုံးတွေ Installing
နေ့စွဲရန်, Adobe Illustrator ၏အမှန်တကယ်ဗားရှင်းနောက်ပိုင်းတွင်အသုံးပြုမှုအတွက်အသစ်ကဖောင့်ထည့်သွင်းဖို့သာနည်းလမ်းနှစ်ခုထောက်ခံပါတယ်။ မည်သို့ပင်နည်းလမ်း၏တစ်ဦးချင်းစီစတိုင်ပေမယ့်လက်စွဲဖယ်ရှားရေးများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူလိုအပ်ခဲ့လျှင်, ပုံမှန်ထည့်သွင်းထားသည်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Photoshop မှာ Installing ဖောင့်
Method ကို 1: မှာ Windows Tools များ
က Illustrator အဘို့, ဒါပေမယ့်လည်းစာသားမအယ်ဒီတာများအပါအဝင်တခြား applications များ, အဘို့မသာကမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးစနစ်သို့ font ကို install လုပ်ရန်သင့်အားခွင့်ပြုအတိုင်းဤချဉ်းကပ်မှု, အများဆုံးစွယ်စုံဖြစ်ပါတယ်။ စတိုင်များအများကြီး၌ဤလမ်းအတွက်သတ်မှတ်ထားတစ်ချိန်တည်းမှာပင်သင့် system နှေးကွေးနိုင်ပါတယ်။
ပထမဦးစွာသင်လိုချင်သောစာလုံးရှာပြီး download လုပ်ပါဖို့လိုပါတယ်။ အများအားဖြင့်ကတစ်ခုတည်းဖိုင် "TTF" သို့မဟုတ် "OTF"စာသားကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များအပါအဝငျ။
ဒေါင်းဖိုင်ကိုနှင့်အထက်လက်ဝဲဘက်ထောင့်, ကလစ်အတွက်ကို Double-click နှိပ်ပြီး "Install".
သငျသညျလညျး, မျိုးစုံဖောင့်ကို select ညာဘက်မောက်စ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးရွေးနိုင်သည် "Install"။ ဤသည်ကိုအလိုအလျောက်သူတို့ကို add ပါလိမ့်မယ်။
ကို C: Windows Fonts
Windows 10 ကို၏အမှု၌အသစ်သောဖောငျ့ကို Microsoft Store မှ install လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
အထက်ပါလုပ်ရပ်များမဖြစ်မနေဖြစ်ပါတယ်ပြီးနောက်, သငျသညျ Illustrator ကို restart လုပ်ပါရပါမည်။ အောင်မြင်တဲ့တပ်ဆင်၏ဖြစ်ရပ်မှာတော့သစ်တစ်ခု font ကိုစံကြားတွင်ဖြစ်လိမ့်မည်။
သင်တဦးတည်းအပေါ်သစ်ကိုဖောင့်၏ installation ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အခြား operating system ကိုအပေါ်အခက်အခဲရှိခြင်းနေတယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့ဒီခေါင်းစဉ်အပေါ်မှာပိုပြီးအသေးစိတ်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုပြင်ဆင်ပြီ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သင်အမြဲမှတ်ချက်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုမေးခွန်းများမေးလို့ရပါတယ်။
Read more: Windows တွင်ဖောင့်ကို install လုပ်နည်း
Method ကို 2: Adobe က Typekit
ယခင်တမတူဘဲ, ဒီနည်းလမ်းကိုသင်ကလိုင်စင်ရ software ကို Adobe ကအသုံးပြုနေသည်တစ်ခုတည်းကိုသာလျှင်သင်ဖို့သင့်လျော်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကင်းသရုပ်ဖော်ထံမှတစ်ဦးသည်မိုဃ်းတိမ်ဝန်ဆောင်မှု Typekit ၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုနှုနျးမှရပါလိမ့်မယ်။
မှတ်စု: ကွန်ပျူတာကို Adobe Creative Cloud installed ရမည်ဖြစ်သည်။
အဆင့် 1: ဒေါင်းလုပ်
ယင်းကို Adobe Creative Cloud ကိုဖွင့်, သွားပါ "Settings" ကို နှင့် tab ကို "Fonts" box ကိုစစ်ဆေးနောက်တစ်နေ့မှ "Typekit ထပ်တူဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်း".
pre-ဒေါင်းလုပ်လုပ် run နှင့် Illustrator installed ။ သင့်ရဲ့ Adobe ကအကောင့်ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ဖို့သေချာပါစေ။
ထိပ် panel ကိုအတူ menu ကိုချဲ့ထွင် "စာသား" နှင့်ကို select "Typekit ကနေဖောင့်ထည့်ပေါင်းပါ".
ထိုအခါသင်သည်အလိုအလျှောက်ခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် Typekit မှ redirected လိမ့်မည်။ အဆိုပါ input ကိုဖန်ဆင်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေပါကကိုယ့်ကိုကိုယ်လုပ်ပါ။
ဆိုက်၏အဓိက menu မှာ, ကိုသွား "အစီအမံ" သို့မဟုတ် "Upgrade"
ဤအအကောက်အခွန်အစီအစဉ်များအနေဖြင့်, သင်တို့၏လိုအပ်ချက်များအသင့်တော်ဆုံးကိုရွေးချယ်ပါ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင်အခမဲ့အခြေစိုက်စခန်းမှုနှုန်းကိုသုံးနိုင်သည်, တချို့န့်အသတ်ရှိပါတယ်။
စာမကျြနှာသို့ပြန်သွားသည် "Browse" နှင့်တင်ပြသည့် tabs များထဲကတစ်ခုရွေးပါ။ ဒါ့အပြင်သင်တိကျတဲ့ tools တွေကိုရရှိနိုင်ပါဖောမျိုးကွဲရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါရရှိနိုင်ပါဖောင့်စာရင်းထဲက, သင့်လျော်သောတဦးတည်းကိုရွေးပါ။ ကန့်သတ်အခမဲ့အကောက်အခွန်၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ဖြစ်လိမ့်မည်။
လာမယ့်ခြေလှမ်းအတွက်သင်က Configuration နဲ့ထပ်တူလုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Sync ကို" အချို့စတိုင်မှပိတ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် "Sync ကိုအားလုံး"တစ်ခုလုံးကို font ကို download လုပ်ပါရန်။
မှတ်ချက်: အားလုံးကတော့ဖော Illustrator နှင့်အတူညှိနိုင်ပါတယ်။
အောင်မြင်သောလြှငျ, ဖြည့်စွက်ဖို့ download ပြုလုပ်စောင့်ဆိုင်းရန်လိုအပ်ကြောင်း။
ပြီးတာနဲ့သင်ကအသိပေးပါလိမ့်မည်ပြီးစီးခဲ့သည်။ ထိုအခါက downloads, ဒရရှိနိုင်ငွေပမာဏအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပြပေးလိမ့်မယ်။
site ပေါ်တွင်စာမကျြနှာအပြင်, အလားတူသတင်းစကားကို Adobe Creative Cloud ပေါ်မှာပြသနေသည်။
အဆင့် 2: စစျဆေး
Illustrator Expand နှင့်ဖောင့်စစ်ဆေးစာရင်းအသစ်တစ်ခုဖန်တီးပါ။
ဒီ tool နှင့်အတူ "စာသား" contents တွေကိုထည့်ပါ။
pre-ကိုနှိပ်ပြီး 'သင်္ကေတများ, မီနူးဖွင့်လှစ် "စာသား" နှင့်စာရင်း "စာလုံး" ယင်းကဆက်ပြောသည်စတိုင်ကိုရွေးပါ။ ယင်းဖောင့်ကိုလည်း panel ကိုအပေါ်နိုင်ပါတယ်ပြောင်းနည်း "သင်္ကေတ".
ဒီစာသားစတိုင်ကိုပြောင်းလဲပြီးနောက်။ re-မြေပုံပိတ်ပင်တားဆီးမှုမှတဆင့်သည့်အချိန်တွင်မဆိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်ပါတယ် "သင်္ကေတ".
နည်းလမ်း၏အဓိကအားသာချက်အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်စတင်ရန်ရန်လိုအပ်ကြောင်း၏မရှိခြင်းအတွက်တည်ရှိသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, စတိုင်များကိုအလွယ်တကူ Adobe က Creative Cloud မှတဆင့်ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Adobe Illustrator အတွက်ဆွဲရန်လေ့လာပါ
အလုပ်လုပ်နည်းလမ်းများပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အသွင်ရောက်အောင်ကြိုးစားကြ, သင်သည်မည်သည့်အကြိုက်ဆုံးဖောင့် ထား. , အကြာတွင် Illustrator မှာသူတို့ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်စာသားစတိုင်များမှဆက်ပြောသည်အဆိုပါအစီအစဉ်တွင်မသာမရရှိနိုင်ပါလိမ့်, ဒါပေမယ့်လည်းအခြားအကို Adobe ထုတ်ကုန်ပါလိမ့်မယ်။
https://termotools.com my.termotools.com © မည်သို့ဖြစ်စေ 2019